Rose of Sharon: အတွေးများ
ခုတလောတွေးဖြစ်နေတာတွေကအများကြီး.... များလွန်းလို့အသစ်မတင်ဖြစ်တာတောင်ကြာပေါ့... သတိတရနဲ့တဂ်လာတဲ့ ချစ်ကြည်အေးကိုတောင် ကျေးဇူးတွေတင်မိပါတယ်... နို့မို့ဆိုဒီလထဲဘာမှရေးဖြစ်မှာမဟုတ်တာအသေအချာ....
၂၀၁၀ ဝင်ကတည်းကတွေးနေမိတာက အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြီဆိုတာပါ... အသက်နဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုက်ညီရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းထုတ်ရင်း အရာရာကိုနားလည်ပေးတတ်ဘို့ သူများတွေကိုအပြစ်မမြင်တတ်ဘို့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကြိုးစားမယ်လို့ စဉ်းစားရင်းကနေ နားလည်ရခက်တဲ့ကိစ္စတွေ ကြုံလာရတဲ့အခါ သက်ပြင်းတွေအထပ်ထပ်ချရင်း ငြိမ်နေလိုက်တော့ အိုကေသွားတာပါဘဲ...
နောက်ထပ်တွေးနေမိတာက ဒီနှစ်ထဲမှာ လုပ်စရာအလုပ်တွေ သိပ်များနေတဲ့အကြောင်းပေါ့.... အိမ်အဟောင်းရောင်းပြီး ကွန်ဒိုတစ်ခန်းပြန်ဝယ်ပြီးတဲ့အခါ အဲဒီမှာလုပ်စရာတွေကအများသား... ရန်ကုန်ကိုဇူလိုင်လောက်မှဘဲ ပြန်နိုင်မှာမို့ ဒီကနေ အစ်မကိုအကူအညီတောင်းပြီး လုပ်ခိုင်းရတဲ့ကိစ္စတွေက ထင်သလောက်ခရီးမပေါက်... ပတ်စပို့သက်တမ်းတိုးဘို့... ဗီဇာကိစ္စ... ခလေးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးဘို့... သားလေးရဲ့မွေးနေ့ပွဲအတွက်စီစဉ်.... ဒီကြားထဲ သင်တန်းတစ်ခုပြေးတက်လိုက်သေးတာ တစ်ပတ်ကိုသုံးရက်... အချိန်တွေမလောက်ရတဲ့ကြားက ဒီသင်တန်းကိုဘာကြောင့်များတက်မိလိုက်တာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းပြန်ထုတ်မိတယ်...
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်သိပ်မပါနိုင်တော့တာ ဇရာကြောင့်လားလို့တွေးမိတယ်... ခလေးတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ အသက်သိပ်ကွာနေသလားလို့တွေးမိရင်း ရင်တွေမောနေတယ်... သမီးလေးကအခုရှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးပြီ... သမီးလေးတက္ကသိုလ်တက်မဲ့အရွယ် အသက်၁၈နှစ်မှာ ကိုယ်က ၄၅နှစ်ကျော်၄၆နှစ်ထဲရောက်နေလောက်ပြီ... သားလေး ၁၈နှစ်မှာ ကိုယ်ကအသက်၅၀.... ကိုယ်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်သူတို့ကျောင်းစရိတ်အတွက် ရုန်းကန်နေရဦးမှာ ကိုယ့်အသက်၅၅နှစ်လောက်အထိ၊ ကိုယ့်ထက်လေးနှစ်ကြီးတဲ့ခင်ပွန်းက အသက်၅၉နှစ်အထိ ရှာသမျှက ခလေးတွေကျောင်းစရိတ်... နောက်တစ်ယောက်ယူဘို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွေးတွေနဲ့ ဒီခလေးနှစ်ယောက်ကိုဘဲ အရိပ်ကြည့်ချစ်နေရင်း ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေ ရှိသမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အားလုံး သူတို့အတွက်ပုံအောရင်း ...ရေဆုန်ရေဆန်အကြောင်းတွေးမိလေရဲ့... ဘာမှပြန်ရဘို့မမျှော်လင့်ဘဲ အကောင်းဆုံးတွေဘဲ ပေးလိုက်ချင်တာပါ.....
နောက်ထပ်တွေးမိနေတာက မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်လာမှာလားလို့ပါ... ကြီးကျယ်သလိုဖြစ်သွားသလား... ကိုယ့်နိုင်ငံသာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုရင် ကိုယ့်သားသမီးတွေ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအများကြီးကြားမှာ ပျော်ပျော်ကြီးနေရမှာ... ခုတော့ ဆွေမရှိ မျိုးမရှ်ိ သူများနိုင်ငံမှာ ကြိတ်မှိတ်ပြီးနေနေရတာ လုံးဝဘဝင်မကျပါဘူး... နိုင်ငံရေးသာအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲလာခဲ့ရင် တော်ရုံတန်ရုံအရင်းအနှီးလေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုလုပ်ရင်း ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဘဲ အခြေချနေထိုင်ချင်တယ်... မျှော်လင့်ချက်ရေးရေးလေးထားမိပါတယ်....
တကယ်တော့တွေးမိသမျှရေးချရရင်ရေးမကုန်နိုင်ပါဘူး... ဒီလောက်ဘဲရေးလိုက်တော့မယ်ချစ်ကြည်အေးရေ... ကျေနပ်တယ်ဟုတ်....
Posted by rose of sharon at 1:12 PM
sonata-cantata March 19, 2010 at 3:35 PM
ထပ်ဆုံးကနေ လာကျေနပ်ပါတယ် ရို့စ်ရေ
rose of sharon March 19, 2010 at 4:09 PM
Anonymous March 19, 2010 at 4:48 PM
Anonymous March 19, 2010 at 8:27 PM
အခုပို.စ်ကတော. ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အခုတလောဖြစ်နေတဲ.ခံစားမှုနဲ.ထပ်တူကျနေလို. .........
ဟုတ်တယ်၊ သူများတိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လောက်ဘဲအဆင်ပြေပြေနေနိုင်တယ်ပြောပြော..ကိုယ်.မိဘသားချင်းဆွေမျိုးတွေနဲ.သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းနေရတာ စိတ်ထဲမှာအင်မတန်နွေးထွေးစေပါတယ်။
အရမ်းကို ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပါတယ်လို.ဘဲပြောပါရစေ အမရေ။
အဖြူရောင်နတ်သမီး March 19, 2010 at 9:14 PM
Shinlay March 19, 2010 at 9:33 PM
ဒီလိုပဲ ညီမရေ... ကျမလည်းဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ ။
ဘ၀အရေး။ သူ့ ဘ၀၊ ကိုယ့်ဘ၀....
Kay March 20, 2010 at 1:08 AM
ဒါဆိုလည်း.. သားရွှေအိုးထမ်းလာပါစေ ပေါ့နော်..
(ဇတ်လမ်းအဖွင့်...)ပြောင်းလဲ ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့..ရန်ကုန်မြို့ တနေရာက..ကွန်ဒိုကြီး တခုမှာ.. ၂ယောက်သားထိုင်ရင်း.. နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်နေမဲ့..သားနဲ့ သမီး အကြောင်း ပြောရင်း ကော်ဖီသောက်နေကြတာပေါ့.. မြင်ယောင်ကြည့်ပေးတာ..
( သားနဲ့သမီး ကို.. မြန်မာပြည်က..တက္ကသိုလ်မှာ..မထားမှာ..သေချာနေလို့.. အဲလို ဇတ်ကွက် ဆင်ပေးထားတယ်နော်..)
ဝက်ဝံလေး March 20, 2010 at 1:18 AM
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေ ရှိသမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အားလုံး သူတို့အတွက်ပုံအောရင်း ...ရေဆုန်ရေဆန်အကြောင်းတွေးမိလေရဲ့... ဘာမှပြန်ရဘို့မမျှော်လင့်ဘဲ အကောင်းဆုံးတွေဘဲ ပေးလိုက်ချင်တာပါ.....
ဒါလေး ဖတ်ပြီး ရင်ထဲ နင့်သွားပါတယ် မရို့စ်ရေ မိဘတွေဆိုတာကတော့ ဒီလိုပါပဲ ဘာမှမမျှော်လင့်ထားဘူးလေ သားသမီးတွေဆီက သူတို့ကသာ ပေးဖို့ အဆင်သင့်လေ
ဟုတ်ပါတယ် မရို့စ်ရေ သမီးတို့ နိုင်ငံကြီးသာ ပြန်ကောင်းလာလို့ကတော့ အဲဒီမှာပဲ နေချင်ပါတယ်
မရို့စ်ရေ ခင်ပွန်း သမီးလေး သားလေးနဲ့ အမ ရော နေကောင်းပါရဲ့လား
Angel Shaper March 20, 2010 at 1:37 AM
မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ ဖြည့်ဆည်းပေးပါစေနော်။
ဂျူနို March 20, 2010 at 2:57 AM
တူတူပဲ ရိုစ်ရေ ရင်မောရတာတွေ သက်သာဖို့ တိုင်းပြည် အခြေအနေလေး နည်းနည်း ကောင်းစေချင်တယ်။
ရှေ့ရေး နောင်ရေး နည်းနည်းလောက် စိတ်ချ ချင်တယ်။ ဟူးးးးးး
လသာည March 20, 2010 at 8:08 AM
ဟုတ်တယ် မိဝေးဖဝေးမှာ နေရတဲ့ဘ၀တွေကနေ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နီးနီးနားနား နေရချင်တယ်..
ကလေးတွေရဲ့ နောင်ရေးကတော့ ရိုစ်တို့မိဘနှစ်ဦးရဲ့ မေတ္တာကြောင့် အစစအဆင်ပြေသွားမှာပါ။ တအားကြီး တွေးပြီး စိတ်မပူနဲ့နော်။ ရိုစ်ပြောသလို အားလုံးဟာ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်းပေါ့။
~ဏီလင်းညို~ March 20, 2010 at 9:26 AM
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာပဲနေချင်တာ အမှန်ဗျာ.....။
ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေပြေမပြေပြေ....ဘယ်မှ မသွားချင်တော့ဘူးးးး
Pwint Myue Zin March 20, 2010 at 9:43 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း March 20, 2010 at 10:34 AM
ThuHninSee March 20, 2010 at 1:02 PM
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အဲလိုဆို သိပ်ကောင်းမယ်နော်။
Sint March 20, 2010 at 1:35 PM
Please don't worry too much. I hadababy girl in my late 30s. Just think, their childhood is so much better than our. Well.... we grow up closer to nature and relatives. It's always good and bad. Cheers!!
ချစ်ကြည်အေး March 20, 2010 at 6:56 PM
ရို့စ်ရေ...မအားတဲ့ကြားက ရေးပေးတဲ့ အတွက် ပိုချစ်သွားပြီ....၊ သားသမီးရှိသူတွေရဲ့ အတွေးလေး...တကယ်ပဲ မေတ္တာတွေ စုန်ဆင်းနေတာ ခံစားလိုက်ရတယ် ရို့စ်ရေ....:)
ကိုလူထွေး March 21, 2010 at 8:36 PM
ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို တောက်ပစေချင်တဲ့ အမေတယောက်ရဲ့ စေတနာကို မြင်မိပါတယ်။
ကိုယ့်သားသမီးတွေ ကောင်းစားသလို မြန်မာပြည်က ကလေးသူငယ်တွေကို ဖြစ်ထွန်းစေချင်တဲ့ စေတနာအတွက်လည်း လေးစားပါတယ်။
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါတာတော့ ဇရာကြောင့် ဟုတ်လောက်ပါဘူးဗျ... ငယ်ငယ်လေးတွေ ရှိကြသေးတာကို...
rose of sharon March 23, 2010 at 11:16 AM
Phyo Evergreen March 23, 2010 at 11:47 AM
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာမှာဘဲ အားလုံးပျော်မွေ့ချင်ကြတာပါဘဲ..။
အမြဲလာအားပေးလို့ကျေးဇူးပါ..။ ကျွန်တော်လာဖြစ်ပေမယ့် ခြေရာမချန်ဖြစ်ဖူးရယ်..။
Nge Naing March 24, 2010 at 6:44 AM
ဒီပို့စ်ကို တင်ထားတာ မတွေ့လိုက်ဘူး။ ကျွန်မမှာလည်း သားတယောက်ပဲ ရှိပြီး ဒီသားအတွက်ပဲ အမြဲတွေးနေတော့ Rose ရေ အတွေးတူနေတယ်။
rose of sharon March 27, 2010 at 2:32 PM
လာလည် ကော်မန့်ရေးသွားကြသော ချစ်ရစွာသောဘလော့ရောင်းရင်းများအား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည် :)
လုလု March 30, 2010 at 8:53 PM
မ ရေ့့့ 
မြန်မာလာလို့ကတော့ ပြောနော်။ တွေ့ကြမယ်နော်။
မဗေဒါ April 7, 2010 at 7:45 PM
ပြန်လို့မရ.. သူများတွေမြန်မာပြည် ပြန်တယ်ပြောတိုင်း
ကျမလာဘူး.. အနှစ် (၂၀) ပြည့်တော့မယ်...။ လွမ်း၏..။
ပေါ့ဆိမ့် May 10, 2010 at 11:04 PM
လူတိုင်းက ပြည့်စုံတယ်လို့ မှမရှိတာလို့ လူတော်တော်များများ ပြောကြတာ ဟုတ်နေတယ် ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တွေ အတွေးဘဲမှ မနေနိုင်ကြတာနော်...